Sorenson Media Tuuji 9 waa nooca ugu dambeeya ee barnaamijka sare ku shaqeeya Sorenson ayaa kuu oggolaanaysa in aad cadaadin wax video, samaynta video in roon inaad koombiyuutarka iyo in la wadaago. Waa barnaamij degdeg ah, oo aad u customizatable, si kasta oo user, cusub ama soo maray, waxaa isticmaali kartaa, haddii aad isticmaasho fursadaha horena ama abuuro tuuryo kuu gaar ah. Sorenson bixisaa ah oo qoto dheer, is-dhexgal tutorial la software iyo website-keeda, laakiin qodobkan ku siin doonaa guudmar ku saabsan sida si aad u bilowdo in talaabooyin dhawr ah.
Iyadoo Tuuji Sorenson Media, aad awoodo inay u dhoofiyaan aad video in qaabab kala duwan, mid ka mid ah maktabadaha ugu weyn ee qaabab barnaamij kasta oo aad ka heli doontaa. Tuuji kuu ogolaanayaa inaad la abuuro videos in ciyaari kartaa lambarka mid ka mid ah website-yada la video oo tayo fiican leh. Waxa kale oo aad ka fogaadaan khilaafaadka dhici kara marka macaamiisha badalato daalacashada ama Guda on isticmaalka qalabka casriga ah sida mobile ama kiniin. Your website kooxda martida aan loo saaray sababta oo ah waxay u isticmaalaan telefoonka ah Android ama iPhone ah, qalabka ama laga yaabaa in aanay taageeri laga yaabaa in qaar ka mid ah qaabab video. Tuuji sidoo kale taageertaa nidaamyada hawlgalka hadda, oo ay ku jiraan Windows 8 iyo Mountain Libaaxa.
Aan niraahno tusaale ahaan in aad rabto in aad cadaadin video ah cayriin galay QuickTime.
Tallaabada 1. U diyaar garoow aad video
Waa sahlantahay si aad u hesho socda adigoo diyaar video ah in ay soo dhoofsadaan. Bilow fikirtid, waxaadse ka audio ee 48kHz, oo aad u hubiso in video dhameystiran yahay marka loo eego content ka hor furitaanka Sorenson. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u sameeyaan hagaajin qaar ka mid ah in Tuuji, sida aynu arki doonaa ka dib.
Tallaabada 2. Daahfurka Tuuji Media
Marka aad diyaar tahay, abuurtaan Tuuji Media. Image Tani soo socda waa wixii bogga ku eg yahay markii ugu horeysay waxa ay aad furto. Haddii aadan rabin in aad isticmaasho Casharrada ah, waxaad ka boodi kartaa boggan adigoo gujinaya Close Tutorial. Waxa kale oo aad uncheck karaa 'U muuji marka uu furmo suuqa Tuuji furmay' doorasho ay si degdeg ah lagu daahfuri software mar soo socda.
Marka software ka fura, furo file doorataa Import File, ama aad soo jiidi kartaa file ka ay folder meel shaqada.
Haddii aad qabto wax badan videos ku cadaadisaa, waxaad iyaga oo dhan ka furan kartaa hal mar oo iyaga cadaadisaa Hal mar u fadhiiso, si dheer sida goobaha aad isku. Ama, haddii aad leedahay qaar ka mid ah files aad u baahan tahay in la sameeyo oo aad rabto in aad shaqo iyaga (wax soo saarka ka video A keenaysaa in talooyin ah ee video B) aragheela, waxaad u samayn kartaa adigoo isticmaalaya Watch fayl. File Isha la cadaadiyo oo dhan wax soo saarka aad rabto in aad la isticmaalayo habkan, halkii la isticmaalayo wax soo saarka files doorsoon, si aad mar walba ka shaqaynaynaa ka asalka ah.
Tani waa bogga shaqada ugu weyn ee Tuuji.
Interface ayaa kuu muujinaysa inta badan badhamada iyo tabs aad dhinaca bidixda. Boos weyn madow on xaq yahay suuqa kala Falanqeynta aad. Sanduuqa Your shaqadoodu tahay meesha ugu hooseysa. Taasi button xaq u hooseysa, Tuuji Waxaa !, waa badhanka ugu weyn ee aad riix doonaa marka aad diyaar u tahay in cadaadin tahay. Waxaan dheeraad ah oo ku saabsan baran doonaa ka dib.
Marka waxa la keeno, waxaad yeelan doontaa in ay wax ka bedel aad video isticmaalaya qalab dhinaca bidix, kor ku xusan, sidaas darteed haddii aad rabto in aad Mozilla ama ka, ama noola aragtidaada, aad sameyn karto oo halkan si aad kaamil video ah waxaad hor bilaabaan inta kale ee geeddi-socodka.
Tallaabada 3. goob wax soo saarka Select
Next, waxaad u baahan doontaa in ay doortaan goob wax soo saarka aad, kiiskan, QuickTime.
Si taas loo gaaro menu, dooro Qaabka iyo suuqa kala Settings riixo, ka dibna riix on QuickTime. Tani furi doonaa ilaa uu furmo suuqa kale oo halkaas ka waxaad dooran kartaa goobaha aad rabto in aad video QT in ay leeyihiin. Waxaa jira presets waxaad isticmaali kartaa, ama waxaad riixi kartaa batoonka Advanced oo waxaa la dhiso goobaha adiga kuu gaar ah.
Tani waa waxa bogga ku eg yahay marka aad soo xulay aad goob. Waxaad arki doonaa sanduuqan qaybta hoose midig ee bogga Tuuji ugu weyn.
Haddii aad rabto in aad hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan doorasho kasta ka hor inta aadan xulan, dul istaagin magaca iyo sanduuq yar arbushin doonaa in uu sharaxayaa waxa ikhtiyaar in ka dhigan tahay, sida aad ka arki sanduuqa buff midab ee sawirka hoos ku qoran. Waxaad kaloo booqan kartaa boggan sharaxaad mid kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan ee xulashada riixo.
Haddii aad go'aansato in aad u astaysto goobaha aad, sida aad u bedeli doorasho kasta, hubi inaad riix batoonka Ok, si meel kasta waxaa lagu badbaadiyey hor inta uusan suuqa xirmin.
Kuwani waa qaar ka mid ah fursadaha in la iman Tuuji.
Haddii aad u dhigay beegyada uu adiga kuu gaar ah, waxaad badbaadin kartaa isticmaalaan marka xigta. Presets sidoo kale waa la bedeli karaa, ka dibna resaved in wakhti dambe la isticmaalo. Haddii aad doonayso, waxaad samayn kartaa adiga kuu gaar ah shakhsi doorasho horena dhammaan goobaha adiga kuu gaar ah - riixo audio, video riixo, filtarrada, iyo wax soo saarka. Waxa kale oo jira ururinta la eego online waxaad ka heli kartaa inaad kala soo baxdo galay Tuuji iyo isticmaalka, laga helay this site .
Halkan waxaa ah xijaab ah kaas oo aad ka dhigi kartaa sida diirada kuu gaar ah. Marka tani, Timecode la caadadii dhigay.
Sida aad arki karto, waxaa jira wax badan oo ka mid ah fursadaha aad kala dooran karto. Mid kasta oo ka mid ah fursadaha, aad u astaysto goobaha, sida opacity ama size font. Haddii aad rabto in aad beddesho goobaha filter ka dib, double click on filter ah ka mid ah liiska. Shaashadda furi doonaa oo waxaad ku samayn kartaa wax ka beddelid, ka dibna riix OK si loo badbaadiyo isbeddelka.
Tallaabada 4. Deji goobaha audio
Waxaad si gooni gooni dhigay karaa goobaha audio ka video, la beddelo goobaha hoos tab Doorashooyinka. Tani waxay faa'iido u compressing videos Hadalka ka duwan aad lahaa video music ku salaysan. Aynu idinku leeyihiin video ah afhayeenka taabanaysa isu-diridda shir. Calan heerka yara audio in 64kbps hoos MPEG-4 (QuickTime ah) riixo iyo kanaalka in Mono (haddii aad rabto in rikoor). Wixii videos la music, waa in aad la dhigay audio in ay 128kbps dooro ikhtiyaarka channel rikoor. Calan aad Output Target in "qoraayaa Rate Inyar". Heerka wax soo saarka muunad Your waa in markaas la dhigay 44.10kHz.
Ha ka walwalin haddii aad maskaxdaada beddesho - waxaad had iyo jeer bedeli karaan goobaha ay xitaa ka dib markii aad codsatay in ay iyaga video ama video qayb, laakiin ka hor inta aadan cadaadisaa video ah
Tallaabada 5. Dalbo goobaha
Aan niraahno waxaad ka dhigteen goob QuickTime horena u gaar ah riixo. Waxaa Click marka aad diyaar u tahay in aad dalbato kuwa goobaha aad video ama videos, ka dibna riix codso. Ama waxaad ku samayn kartaa mid ka mid ah fursadaha horena. Haddii kale, waxaad u jiidi karaan dejinta aad doorato in ka badan clip ah oo halkaas ku daadiyaa.
Waxaad ku eegaan karo wax kasta oo saameyn in aad rabto in aad codsato ka hor compressing adigoo isticmaalaya slider A / B ah. Haddii kale, waxaad cadaadin karaa shan ilbiriqsi oo ah video oo la arko Xiisaha Leh. Sidaas ayaadna ku ogaan kartaa waxa riixo ku eegi doonaa sida ka hor inta video oo dhan la cadaadiyo, si aad u samayn kartaa hagaajin kasta oo lagama maarmaan ah.
Tallaabada 6. Ku dar qaababka kale haddii aad rabto
Tuuji si toos ah u abuuri karaan tag HTML ah kuu wanaagsan in ay xaqiijin doonaan ma waxa browser website booqdaha isticmaalayo arrinta, waxaad yeelan doontaa video saxda ah u yeeshaa. Waxaa jira qaababka kale waxaad ku dari kartaa, sida daa xiran, ama fursadaha pre-roll / post-roll (taasoo la micno ah in hogaanka video ama keeni baxay video).
Tallaabada 7. Ku bilow geedi socodka cadaadi
Waxaa la gaaray waqtigii ku cadaadisaa. Riix Tuuji Waxaa! badhanka hoose ee shaashadda si ay u bilaabaan riixo. Waxaa jiri doona bar horumar la timaada in aad ku tusi doonaa xaaladda a. Iyada oo ku xidhan dhererka aad video, siin barnaamijka 5-10 daqiiqo dhammayn. Tani waa sida ugu badan lix jeer ka dhakhsi badan barnaamijyada kale riixo. Barnaamijka waxaa si toos ah badbaadin doonaa in folder la mid ah sida asalka ah. Waxa kale oo aad dooran kartaa Upload toos ah haddii aad doonayso inaad mid ka mid ah shan goobood.
Tani waa sanduuqa si loo doorto goobo Upload aad ka. Haddii aad doonayso in aad qabato Upload caado, waxaad u samayn kartaa sidoo kale. Dooro Publishing Options on hoose ee column bidix, oo wuxuu soo geli macluumaadka ku jira sanduuqa. Marka aad u badbaadin sida OK, waxaa geliyaan doonaa video aad u sidan. Waxa kale oo aad samayn kartaa geeyo live adeegsanaya qaabkan Apple ee loo yaqaan HLS.
Waxaa aad qabtid! A raadinaya video xirfad uploaded in aad website, niyad lacag la'aan ah, in aan qaadan ton waqti.
Barnaamijka Your Tuuji sidoo kale yimaado oo la Sorenson 360 bilaash ah, oo aad ku helayso boosteejo ah oo video daabacaadda qaab aan muuqan oo la shaqeeya dhamaan barnaamijyada Sorenson ee. Waxaad daabici kartaa bogga intarnetka kasta, meel kasta oo adduunka ah, iyadoo ciyaaryahan video si fudud kartoo. Fayl ay si sahlan u abaabulan, iyo subaccounts lagu hagaajin karo si xafiisyo badan ka heli karaan faylasha iyo u isticmaalaan. Waxa kale oo aad fursad u dhigay ilaa iyo playlists bixiyaan saxafiyiinta Facebook.
Sida aan ku soo aragnay, in tallaabooyin dhawr ah oo ka badan koorsada daqiiqado yar, waxaad qaadan kartaa file a video cayriin oo cadaadin ah ee koombiyuutarka fududahay in tiro ka mid ah website-yada. Faalladaada inta ay socoto waxaa si fudud la gaadhay, sidoo kale. Wax kasta oo aad rabto in aad video, in la yidhaahdo, waxaad u dhici la Sorenson Media Tuuji 9.
Sida loo sameeyo Animation Character in dib markii Raadka
Sida loo Beddelaan MOV (Quicktime) in 3GP
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa Videos la Sorenson Media Tuuji 9